Ngụsị akwụkwọ Songs - Songs maka ngụsị akwụkwọ Slideshows
Best ngụsị akwụkwọ Songs Akwadoro maka ngosi mmịfe
Ngụsị akwụkwọ bụ a nne na nna si nrọ, na a na-amụrụ ihe ịna onwunwe. Ngụsị akwụkwọ bụ a ememe nke ịga nke ọma na rụzuru. Ịhọrọ zuru okè ngụsị akwụkwọ song pụrụ ịbụ ihe ịma aka, na-akụda, na-ewe oge ọrụ. E nwere ọtụtụ ijeri ngụsị akwụkwọ songs na i nwere ike ịhọrọ site na, na ọtụtụ ijeri ndị songs na-eme ka egwu ngụsị akwụkwọ songs. Anyị weere a ndepụta nke funniest, kasị emetụ n'ahụ, kpochapụwo, kasị ewu ewu na, na craziest ngụsị akwụkwọ songs. Ị nwere ike ịchọta niile nke kasị ukwuu ngụsị akwụkwọ songs na otu ebe!
Part 1: Akwa ngụsị akwụkwọ Songs-atụ aro
Nkebi nke 2: Mee ngosi mmịfe Video na ngụsị akwụkwọ Songs na Photos
#Funny Ngụsị akwụkwọ Songs
1. Nke atọ Eye Blind-Ukpep
2. The Weepies- nwere ike ghara ịga Back Ugbu a
3. My Chemical Romance-abụ abụ
4. Amy Grant- m ga-echeta Ị
5. beatles-Na My Life
6. Foo alụso-Times dị ka ndị a
9. beatles-With a Little Help Site My Enyi
10. Semisonic-emechi Time
#Touching Ngụsị akwụkwọ Songs
1. Mfe Minds- Unu ị na-echefu Banyere M
3. Eve 6-a bụ ka Night
4. Bon Jovi-Ọ bụ My Life
5. Sarah McLachlan-m ga-echeta Ị
7. Demi Lovato-Onyinye nke Enyi
8. Kelly Clarkson-A oge Dị ka a
9. Jọdan Edemede-You'll Mgbe eje Ije Naanị
10. Jọdan Hill-Cheta m otú a
#Classic Ngụsị akwụkwọ Songs
1. Taylor Hicks-M na-eme Ị mpako
2. Jason Chen-Best Enyi
3. Chris Isaak-ememme ngụsị akwụkwọ Day
4. New radicals-Ị Nweta ihe ị Nye
5. Monah Peters-oge ntoju
6. Mariah Carey-Mgbe i kweere
7. Mgbazinye-kara nke Ịhụnanya
8. The Edemede-Live ka anyị na-na-anwụkwa
9. Vitamin C-ememme ngụsị akwụkwọ (Enyi Ruo Mgbe Ebighị Ebi)
10. R. Kelly-ekwere na m nwere ike ofufe
#Most Popular ngụsị akwụkwọ Songs
1. The Rembrandts-I'll-adị n'ebe ahụ Ị
2. Kenny Rogers-site na afọ
3. Natasha Beddingfield-adịbughị ede ede
4. Boys II Men-ọ bụ ya mere ike ikwu Goodbye
5. Bruno Mars-Taa My Life Amalite
6. Kelly Clarkson-Ike
8. nicki minaj-ada
9. 10,000 Maniacs-ndị a bụ ụbọchị
#Crazy Ngụsị akwụkwọ Songs
1. Black nchara peas-enwere m mmetụta
2. Cyndi Lauper-ezi na agba
3. Beach Boys-ememme ngụsị akwụkwọ Day
6. Rusted Nkpọrọgwụ-Send Me On My Way
7. Yael Naim-New Mkpụrụ Obi
8. baz Luhrman-bụla si Free (na-eyi sunscreen)
10. Kere Dragons-ọ bụ Time
Ọ bụrụ na ị na-aga-eme ka ihe ngosi mmịfe na n'elu ngụsị akwụkwọ songs na photos, i nwere ike mkpa a ngosi mmịfe Ndinam ngwá ọrụ iji n'ihi ya, ọ site onwe gị. Wondershare Fantashow Ga-ezi nhọrọ. Ọ na-enyere gị n'otu ntabi-eme ka ndị dị otú ahụ otu nnukwu ngosi mmịfe si foto na vidiyo maka ekere òkè fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla. N'okpuru ebe a bụ ngụsị akwụkwọ ngosi mmịfe sample kere na ya. QuickTime plugin a chọrọ iji na-egwu ya. I nwekwara ike ibudata na-eme ka gị onwe gị na ngosi mmịfe na ya.
Ebe a bụ ụfọdụ aro Christian ngụsị akwụkwọ Songs, Ọzọkwa
Ọ bụrụ na gị akwụkwọ bụ a Catholic ụlọ akwụkwọ sekọndrị, mgbe ahụ, na-agbalị ịchọta a zuru okè Christian ngụsị akwụkwọ Song n'ihi na gị ngụsị akwụkwọ ụbọchị.
"Enyi" (Michael W. Smith)
"Enyi bụ ndị enyi ruo mgbe ebighị ebi," Michael W. Smith bụrụ na okwukwe ya na-ewu ewu song "Enyi", ma na ngụsị akwụkwọ-ịke lyrics. Nke a song a na-ewere dị ka otu n'ime ndị kasị ewu ewu ngụsị akwụkwọ Oldies n'etiti Christian ngụsị akwụkwọ songs. The song ewebata ndị mmụọ nke mbukota elu nrọ ma na-eburu onye ọ bụla ọzọ na aka dị ka ha na-amalite aga n'ime n'isiakwụkwọ na-esonụ nke ha na-eto eto ndụ.
'Ike nke oge "(Chris Osikapa)
Nke a Christian song na-ada ka ọha na eze site dịkọrọ ndụ Christian ọbụ abụ / songwriter Chris Osikapa, site n'oge gara aga n'ọnụ album. Ọ na-atụ aro na "Right now bụ nanị oge na mkpa." Na osikapa jụrụ Chineke ya iji gosi ya "mkpa nke ihe ndị dị mfe," a echiche nke ahụ bụ mkpa ka ndị Kraịst ngụsị akwụkwọ song nhọrọ.
"Anyị na-na malitere nnọọ" (Run Kid Run)
Nke a Christian ngụsị akwụkwọ song na-abịa site album Nke a bụ ndị anyị Area site a Christian Pop-Rock gbalaga. O nwere ike ịbụ ihe ndị kasị ụma Christian ngụsị akwụkwọ song ebi. The song nakwa dere bụ mmụọ nke na niile na-agụsị akwụkwọ nke a Christian ụlọ akwụkwọ sekọndrị ga-abụ na-ewe iji miri emi ha obi.
Olee otú mbupu, ịzọpụta na ibipụta Facebook Ozi na Facebook.com
Olee otú Mee a Ahaziri bachelorette Party Òkù Kaadị Mfe
Olee otú Mee ihe HTML5 ngosi mmịfe
> Resource> Atụmatụ> ngụsị akwụkwọ Songs maka ngosi mmịfe